Madaxweyne Farmaajo oo ku casumay madaxweynayaasha maamul goboleedyada shir ka dhici doona Muqdisho bisha soo socota - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMadaxweyne Farmaajo oo ku casumay madaxweynayaasha maamul goboleedyada shir ka dhici doona Muqdisho bisha soo socota
June 25, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku casumay madaxweynayaasha maamul goboleedyada in ay ka soo qeybgalaan shir ka dhici doona Muqdisho.
Shirka ayaa qabsoomi doona inta u dhaxaysa 5-8 bisha July, 2020, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya maanta oo Khamiis ah.
Ajandaha shirka ayaa noqon doona sidii wadatashiyo ballaaran looga yeelan lahaa doorashooyinka dalka, arrimaha amniga, dagaalka ka dhanka ah kooxaha argixisada, dhammeystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha dalka, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.
Dhawaan, madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaasha ayaa kulan ku yeeshay khadka internet-ka.
Shirka ayaa ku soo beegmaya iyadoo khilaaf uu ka dhex jiro qaar katirsan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, iyo xukuumada Madaxweyne Farmaajo oo wakhtigeedii uu sii dhammaanayo.
July 20, 2020 Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka oo markii ugu horeysay sanad kadib kulmay